Isi ahia ahia 3 kacha elu emepere ahia ohuru | Martech Zone
Gini mere i ji malite ahia gi? Aga m nzọ n'ugbo ahụ “n'ihi na achọrọ m ịbụ onye ahịa” abụghị azịza gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị dị ka otu narị narị ụmụ obere azụmaahịa mụ na ha rụkọtara ọrụ nwere ike ịghọta gị ihe dị ka sekọnd 30 ka ị meghere ụzọ gị na ọ bụrụ na ị ghọrọ onye na-azụ ahịa, ị gaghị abụ onye nwe azụmaahịa ruo ogologo oge. Ma, kwuo eziokwu, nke ahụ na-ewute gị n'ihi na ị naghị enwe ọ marketingụ n'ahịa ma ọ na-adọpụ gị na mpaghara ndị ọzọ nke azụmahịa gị.
Enwere m ezigbo ozi ọma. Ọ bụ ezie na enweghị ụzọ ị ga-esi wepụ mkpa maka ịre ahịa azụmaahịa gị, ịnwere ike iwepu oke nkụda mmụọ gị site na ịza oke mmejọ ahịa atọ m hụrụ ndị azụmaahịa na-eme.
Emehie # 1: Lekwasị Anya na Usoro Ọjọọ
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke data dị iji nyochaa ahịa taa dị egwu. Nchịkọta Google, n'onwe ya, na-enye data dị ukwuu nke na ị nwere ike iri ngwụcha izu niile na-enyocha ya - naanị iji chọpụta na ọ na-eduga na nkwubi okwu na-emegiderịta onwe gị dabere na data ị butere ụzọ. Ma nke ahụ bụ naanị data maka ebe nrụọrụ weebụ gị! Kọ maka mgbasa ozi dijitalụ, mgbasa ozi mmekọrịta na mpaghara ahịa ndị ọzọ dịka oke na-emegiderịta onwe ha.
Inwe ohere inweta data niile ahụ bụ ihe dị mma, mana ọ nwere ike ịdọpụ uche ndị nwere obere azụmaahịa na data dị ezigbo mkpa. Ọ bụ ya mere o ji dị oke mkpa iji belata nlezianya gị na naanị ọnụọgụ abụọ nke mechara metụta ahịa: Ọ bụrụ na ọnụọgụ ego bụ nsogbu ị ga-achọ ilekwasị anya na Monthly ma ọ bụ Kwa Ahịa Ndị Ahịa karịa Ndụ Ndụ, mana ụkpụrụ bụ isi bụ otu. Ọ bụrụ na ọnụ ahịa (ya bụ ego ha nwetara) nke onye ahịa karịrị ọnụ ahịa iji nweta onye ahịa, ị nọ n'ọnọdụ dị mma. Azụghị azụmaahịa bara uru na ọnụọgụ ihe efu dị ka ịpị aka, mmetụta na mmasị. A na-ewu ụlọ ọrụ bara uru site na ọnụọgụ nke enwere ike ịdebe n'ụlọ akụ, yabụ lekwasị anya na ndị ahụ.
Emehie # 2: Lekwasị Anya na Usoro Ọjọọ
Enweghi ụkọ ụzọ na ngwa ọrụ ndị obere azụmaahịa ji azụ ahịa ahịa ha taa. O di nwute, otutu obere ulo oru na-achota nani ihe ndi mmadu na-eme ma na-eleghara usoro ahia di nkpa anya. Ha na-elekwasị anya oge na ego ha niile na usoro nke na -emepụta mmasị, ndị na-eso ụzọ, ma mepee ka ha na-eleghara usoro ndị dị mkpa anya na-eduga ntụgharị, njide ndị ahịa, na aha ịntanetị nke na-eweta dollar. Nsonaazụ bụ atụmatụ azụmaahịa na-eme ka ha na-arụsi ọrụ ike ma nwee mmetụta dị mma mana nkwupụta ego ha na-eme na-arịa ha afọ.
Kama ịchụ ụdị ahịa ahịa niile kachasị mma, ndị nwere obere azụmaahịa kwesịrị ilekwasị anya na ịbawanye ego sitere n'aka ndị ahịa gị dị ugbu a, na-abawanye pasent nke ndu ndị na-aghọ ndị ahịa, yana ịbuga ahụmịhe ndị ahịa na -emepụta ndị na-agba ọsọ. Ihe ndị a dị mkpa bụ ntọala maka azụmaahịa na-enweghị uru, enweghị uru. Ha agaghị eme ka azụmahịa gị dị jụụ dị ka ịwụli elu na blọgụ mgbasa ozi kachasị mma, mana ha ga-eme gị ego - ọ bụ na ọ bụ ihe kpatara ịmalite azụmahịa gị na mbụ?
Emehie # 3: Lekwasị Anya na Njọ Ọjọọ
N'ime afọ iri gara aga, ike ịkọwapụta akara azụmaahịa agbanweela azụmaahịa ahụ gaa na ndị ahịa. Afọ iri gara aga azụmaahịa gafere site na mmekpa ahụ iji kọwaa akara ha wee mepụta ahịa ahịa iji gwa ndị ahịa ihe ha chere na akara ha bụ. Ihe niile gbanwere. N'ụwa taa, ndị na-azụ ahịa na-akọwapụta azụmaahịa 'azụmaahịa na teknụzụ leverage na mgbasa ozi mmekọrịta iji gwa azụmahịa ahụ - yana narị otu narị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị puku, nke ndị ahịa ndị ọzọ - ihe akara ha bụ n'ezie. Ha na-eme ya 24/7/365.
O bu ihe nwute, otutu azumahia (ma ndi ukwu ma ndi nta) adabaghi ​​imeghari ire ahia ha iji gosiputa mgbanwe a. Ha na-aga n'ihu na-elekwasị anya n'ahịa na ịkọ na ire. Ha na-eziga otutu ozi ịntanetị, postkaadị template, ma dabere na mwepu ego iji jigide ndị ahịa ha. Brandsdị ndị ahịa akọwapụtara, n'aka nke ọzọ, na-elekwasị anya na ahịa ha na ahụmịhe ndị ahịa na mmekọrịta. Ha na-eziga ozi ekele, ozi ịntanetị afọ ojuju ma nyefee ahụmịhe na-agbanwe agbanwe, klaasị ụwa iji jigide ndị ahịa ha.
The si eme bụ otu, ma na-elekwasị anya bụ dị iche iche. Malite site na ịkọwapụta ahụmịhe ịchọrọ ịnye ndị ahịa gị ma wuo ahịa gị gburugburu na-akwalite ahụmịhe ahụ yana arụmọrụ gị na-ebute ya. E nweghị ihe ọ bụla na-ezighị ezi na-ekpebi ihe ị chọrọ gị ika na-, ma na njedebe nke ụbọchị ọ bụ na-eji ọkụ na-aga na-ekpebi ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ọ bụ n'ezie.
Tags: brandnnukwu ozi ịntanetịnjigide ndị ahịaegoGoogle Analyticseduahịa metricsusoro ahiaahia ahiaelekọta mmadụ mediaTechnologyKaadị mpempe akwụkwọ
Mark Montini bu onye isi ndi isi na Usoro m2M, ihe Atlanta dabeere na franchise ahịa ike na ọkachamara na ihe putara ighe tụnyere technology, ahịa, na data na-eto eto ndị ahịa ha 'akara. Amara maka ike ya ịhazi ụlọ mmemme zuru ezu agbasoro usoro mgbasa ozi, Mark enyerela aka na franchise, ụlọ ọrụ Fortune 500, mmalite, enweghị uru, yana ọbụlagodi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abawanye ego.
Site na Nhazi nke Onwe-ya